Isitolo se-SARM UK: Ukukhulisa ikhwalithi yakho yokuphila
Isitolo Sarms Mayelana nathi
Isekelwe e-UK, thina Isitolo Samasitolo kholelwa ekwandiseni ikhwalithi yempilo futhi ufuna ukudala ukulingana okungcono phakathi kokuzivocavoca kanye nendlela yokuphila. Ngokusiza amakhasimende ethu azuze imiphumela yawo ngendlela ephumelela kakhulu.
Sidayisa ikhwalithi ephezulu kakhulu AmaSarms & Izithako ephephile, esebenzayo futhi esemthethweni. Lokhu kwenziwa e-UK kumazinga esezingeni eliphakeme kakhulu kusetshenziswa izithako zebanga lemithi. Ama-Sarms asetshenziswa ngokwengeziwe phakathi kwabakhi bomzimba, abasubathi & nabahamba ejimini jikelele abafuna ukuthuthukisa umzimba wabo.
AmaSarm ayisigaba esisha sezithasiselo manje esezenze zonke ezinye izindlela zokuzuza kwemisipha nokulahleka kwamafutha. Ama-steroid & ama-prohormones manje athathwa njengasasebenzi futhi awanikeli ngomvuzo ofanayo wobungozi owenziwa amaSarms.
AmaSarms ngokuvamile awanayo imiphumela emibi kakhulu kepha ahlinzeka ngokwakha okukhulu kwemisipha nezakhiwo zokulahleka kwamafutha. Ama-Sarms awasona isibindi anobuthi, awabangeli ukushintsha kwemizwelo ye-baldness neminye imiphumela emibi engafuneki eyenziwa yi-Steroids, peptides & prohormes!
Ngokungafani ne-steroids, amaSarms enzelwe ukubopha kuphela kuma-receptors wemisipha.
Ama-steroid nama-prohormones abopha hhayi kuphela kuma-receptors wemisipha kepha nakwizinombolo eziningi zama-receptors kufaka phakathi ubuchopho, izinwele namehlo. Lokhu yikho okubangela imiphumela emibi njengokushintshashintsha kwesimo sengqondo, ukulahleka kwezinwele kanye nezinkinga ngombono. AmaSarms angavame ukubizwa nge- "Designer Steroid" yize kungesilo i-steroid kepha indlela anganikeza ngayo imisipha emnandi yokuthola nezindawo zokulahleka kwamafutha ngaphandle kwemiphumela emibi yilokho okunikeza igama lesidlaliso. Iningi lamaSarms alinciphisi amazinga akho e-testosterone yemvelo okusho ukuthi asikho isidingo se-PCT. Abanye abasebenzisi basebenzisa i-testosterone booster yemvelo ngemuva komjikelezo kepha ayidingeki kangako. Lokhu kusho ukuthi ugcina i-100% yenzuzo yakho.
Ukubuka konke kwezakhiwo zeSarm
Ngezansi sibhale izici eziyinhloko zeSarm ngayinye, ukusiza ukunikela ngesibukezo sokuthi yini amaSarms angahle athathwe ngezinhloso zomsebenzisi ngamunye.
Amalebhu Owakhiwe Ngomzimba Ostarine MK-2866 "Umjikelezi wonke" Ukuncipha kwemisipha nokulahleka kwamafutha ngezinzuzo ezomile kakhulu ngaphandle kokugcinwa kwamanzi.
Amalebhu Wokwakha Umzimba Ibutamoren MK-677 "IHormone Yokukhula" Izokhulisa amazinga e-GH emzimbeni. Isikhathi sokululama esithuthukisiwe, ukuhlala kahle, ibala ngenkathi ufaka isisindo semisipha futhi ulahla ukulahleka kwamafutha. Futhi iphilisa amathambo namathenda amahle okusheshisa ukutakula nokuvuselelwa.
Amalebhu Wokwakha Umzimba I-Testolone RAD-140 "I-Anabolic 90: 1" Le yi-Sarm ye-anabolic kakhulu engabangeli ukucindezelwa futhi izophumela ekuzuzeni okuhle kwemisipha futhi ayinikezi umsebenzisi ukugcina amanzi. Inhlanganisela enkulu yalabo abafuna ukuthola imiphumela esikhathini esifushane.
Amalebhu Owakhiwe Ngomzimba I-GW-501516 "Ukukhuthazela Nokulahlekelwa Amafutha" Ngisho nangemva komthamo wokuqala ozoqaphela ukuthi ungagijima isikhathi eside, uphendule kanzima futhi ubukeke semithambo yegazi. Le Sarm izosiza abasebenzisi ukuthi baphule inhlamba futhi bahlubule amanoni angafuneki. Kusebenza okuhle kukodwa kepha kungena kokukodwa lapho kugcwele nge S4 & noma Ostarine
Amalebhu Akhiwe Ngomzimba Andarine S4 "Ukusika Isarm" Kuhle kubasebenzisi abasika lesi sarm kukhanya ngempela. Ubeka umzimba esimweni esivuthayo samafutha ngenkathi ugcina imisipha futhi ungeza ne-vascularity. Izakhiwo ezichazwe ngokufana ne-winstrol lokhu kubekiwe kahle.
Amalebhu Wokwakha Umzimba S-23 25mg "Abasebenzisi Abanolwazi" Unamandla kune Ostarine, lokhu kunconyelwa abasebenzisi abafuna imiphumela ebabazekayo esikhathini esifushane.
Amalebhu Owakhiwe Ngomzimba Ligandrol LGD-4033 "IMisa nokuphilisa" I-Sarm enhle kakhulu yokwazi ukubeka imisipha nesisindo esikhathini esifushane. Futhi ucwaningo lukhombisa ukuthi kwandisa ukuqina kwamathambo futhi kubuyisa ukulimala.
Amalebhu Akhiwa Ngomzimba Stenabolic SR-9009 "I-Fat Stripper" Isikali esihle kakhulu sokulahleka kwamafutha, lesi sarm sisebenza ngokwenza umzimba ukhiqize ama-mitochondria amaningi okwenza umzimba ushise amanoni amaningi futhi uthuthukise ukukhuthazela. Ukubuyela emuva kule Sarm impilo yayo yesigamu esifushane okusho ukuthi kufanele ithathwe njalo emahoreni ama-2-4. Abasebenzisi abangakunaki lokhu kufanele bacabangele lesi sarm.
Amalebhu Akhiwa Ngomzimba ACP-105 "Ukukhula kwemisipha" Inokugcinwa okuthile kwamanzi kepha inikezela ngokwanda okukhulu ekukhuleni kwemisipha namandla. Kufakazelwe i-66% enamandla kune-testosterone.
Amalebhu Wokwakha Omzimba Owakhiwe Ngomzimba - Kuhle kakhulu kumuntu omusha kumasarms efuna ukulahleka kwamafutha ukuqala.
Amalebhu Akhiwe Omzimba Aphakathi Nokusika - Ilungele umuntu ofuna ukulahleka okukhulu kwamafutha umsebenzisi omusha noma okhona weSarms.
Amalebhu Wokwakha Okuthuthukile Womzimba - Lesi isitaki esihle kakhulu esikhona sokukhipha amafutha amaningi futhi usathola noma ugcine imisipha.
Amalebhu Omzimba Aqalayo Womzimba - Izinga lokungena elihle kumaSarms kubasebenzisi abafuna ukwengeza amakhilogremu ambalwa emisipha emavikini ayi-8-12.
Amalebhu Omzimba Akhiwe Asemkhatsini - Iyakwazi ukwengeza u-5-10kg wemisipha esikhathini samasonto ayi-8-12.
Amalebhu Wokwakha Omzimba Othuthukile Womzimba - Isitaki esihle kakhulu esitholakalayo sokwengeza usayizi wemisipha
Amalebhu Akhiwe Ngomzimba Yohimbine HCL - "Isishisi esinconyiwe esinconyiwe" Sincoma i-Yohimbine njengesikhethi sethu sokukhetha samafutha. I-Yohimibine ayilona iSarm iyi-Bark yesihlahla sayo yemvelo kepha inezindawo ezinhle zokulahleka kwamafutha futhi isebenza kahle nganoma iyiphi i-Sarm.
Ama-SARMS ayindlela ephephile, esemthethweni ye-steroids: isigaba sokuphumelela sezithasiselo ezisebenza ngokufana nama-prohormones nama-anabolic steroids ngaphandle kwemiphumela emibi. Imvamisa ibizwa nge-Designer steroids, i-SARMS imele iSelection Androgen Receptor Modulator. Ngokungafani ne-anabolic steroids noma ama-prohormones anokuthambekela kokubopha kuma-receptors angafuneki njengezinwele namehlo futhi abangele imiphumela emibi engafuneki, ama-SARM asebenza ngokuzibopha ngokukhetha kuma-androgen receptors emisipha nasethanjeni. Lokhu kubopha okukhethiwe kubangela ukwanda okukhulu ekusebenzeni nasekululameni futhi kuyisinqumo esikhangayo kulabo abathintekayo ngempilo yabo nangemiphumela emibi engaba khona.
Yini engingalindela kumjikelezo wami we-SARMS?
Ama-SARMS amaningi angabekwa ukuze kukhuliswe imiphumela ekukhuleni kwemisipha emile nokulahleka kwamafutha. Ngokwenza umjikelezo wakho we-SARMS nesitaki, ungalungisa umphumela wokugcina ozama ukuwufinyelela. Imiphumela ejwayelekile ingaba wukunyuka okungu-3kg-10kg kwezicubu zomzimba ezinciphile ngenkathi ilahlekelwa ngamaphesenti amaningi amafutha omzimba.
Ngabe ngizogcina ukuzuza kwami ​​kumjikelezo wami we-SARMS?
Yebo! Ngokuhlinzeka ngokudla kwakho nokuqeqeshwa kwakho kuhlala kuhlolwa, ungalindela ukugcina yonke imiphumela yakho ngemuva kokuqeda umjikelezo weSARMS. Ngokungafani nama-prohormones nama-Anabolic Steroids SARMS awabangeli ukuvala shaqa (umzimba uyeke ukukhiqiza i-testosterone yemvelo) lokhu kuvame ukuthi kungani abasebenzisi abaphuma emjikelezweni wabo bexegise imiphumela yabo eminingi njengoba ama-hormone abo engakwazi ukugcina imisipha efakwa phakathi nomjikelezo. Ngenhlanhla yabasebenzisi be-SARM, lokhu akunjalo futhi ama-hormone ngokuvamile ahlala engathinteki.